Ihe Nduzi kachasị mma iji mee ka ọrịa cancer ara na ụmụ nwanyị
Ihe niile gbasara ihe atụ
1. Kedu ihe bụ onye ọhụụ? Kedu ka o si arụ ọrụ? 2. Kedu ka ọrụ dị mma?
3. Ebube Na-eji 4. Ụdị ogwu
5. Nsonaazụ ọhụụ 6. Ọkara ndụ
7. Ụdị mmetụta dị egwu 8. Uru abia
9. Nyocha ndị dị mma 10. Ọpụpụ maka ire ere
11. Ọ bụ ihe na-egosi na ị na-agwọ ọrịa cancer ara na ụmụ nwanyị
1.Kedu ihe bụ onye ọhụụ? Kedu ka o si arụ ọrụ?
Ọhụụ (107868-30-4) bụ ọgwụ oral nke a na-eji mee ihe maka ịgwọ ụdị ọrịa kansa dịka ọrịa cancer nke ọrịa hormone-receptor-positive. A na-ejikarị ọgwụ eme ihe n'ịgwọ ọrịa cancer na ụmụ nwanyị mgbe ha mechara. Ọpụpụ (107868-30-4)na-ekerekwa òkè dị mkpa iji gbochie nlọghachi ọrịa cancer na ndị ọrịa. Dịka, ụfọdụ ọrịa cancer nke estrogen na-akwalite uto ọrịa cancer. Nje ọgwụ a enyerela ọtụtụ nde ndị ọrịa na-arịa ọrịa cancer aka, otu dọkịta ga-ekwukwa ọgwụ ahụ mgbe ị nyochachara ọnọdụ gị. Ọgwụ a na-arụ ọrụ site n'ịbelata ogo hormones estrogen n'ime ahụ gị, nke na-enyere aka belata ma gbanwee ọrịa cancer ara.
Otú ọ dị, n'agbanyeghị ọgwụ a bụ nchọpụta dị oke mkpa nke ga-enyere gị aka ịchịkwa ọrịa ara ara, ụmụ nwanyị na-amụ nwa ga-ada mbà n'iji ya eme ihe. A pụrụ iji ọgwụ na ọgwụ ndị ọzọ dịka goserelin (Zoladex) ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ dabere n'ọnọdụ gị. Iji ọgwụ na-enweghị ọgwụ dọkịta nwere ike iduga na nsogbu ndị siri ike, ya mere, ọ dị mma na ị ga-aga maka nyocha ahụike tupu ịmalite iji ya. Ọgwụ dị na ụdị dị iche iche dịka Aromasin ma ọdịnaya, na usoro onu ogugu di otu. Ị na-agwọ ọrịa kwesịrị iduzi gị n'ime usoro ahụ dum site na zụrụ iji mee ihe.
Ị nwere ike ịzụta ọgwụ na weebụ ma ọ bụ site na onye ọ bụla na-ere aha aha gị gburugburu. Otú ọ dị, ọ dị mkpa ka ị kpachara anya mgbe ị zụrụ ọgwụ ọ bụla ebe ọ bụ na ịnwere ike ịchọta ngwaahịa na-ezighị ezi na-enweghị ike ịhapụ nsonaazụ ịchọrọ. Anyị ga-atụle otú na ebe ị ga-azụ ihe kachasị mma na àgwà dị elu n'isiokwu a.
2.Kedu ka ọrụ dị mma?
Dịka e kwuru n'elu, ọgwụ a na-arụ ọrụ site n'ịkwụsị ma ọ bụ na-ebelata mmepụta hormone estrogen n'ahụ gị. Nke hormone a bụ ihe na-akpata mmepe nke ọrịa ara ara, ọ bụrụ na enweghi mmepụta, ọ pụtara na ị ga-achịkwa uto ọrịa ahụ. Otú ọ dị, ọgwụ a bụ nanị dị irè n'ịgwọ ụdị estrogen receptor positive (ER +) nke ọrịa cancer. Nke ahụ pụtara na, ọ bụrụ na ọnyá ara gị bụ onye na-anabata ọrịa hormone na-adịghị mma, Ọpụpụ agaghị enyere gị aka ịchịkwa ọrịa ahụ. Ya mere, ọ bụghị ọrịa cancer ọ bụla nwere ike ịgwọ ya.
Estrogen bụ hormone mmekọahụ nke na-arụ ọrụ dị mkpa n'igbu nwoke na nwanyị, ọ bụkwa ya mere ụmụ nwanyị ga-eji nweta ọgwụ mgbochi ahụ. Ọ bụrụ na ị nọ n'ụdị a, mgbe ahụ, dọkịta gị ga-atụ aro ọgwụ ọzọ maka ọrịa kansa gị ma ọ bụrụ na ị naghị ezube ịzụ ụmụ. Estrogen pụtara ala na ị gaghị enwe ike ịmịpụta dịka nwanyi, ya mere, ọ dị mkpa ka ị nyocha ahụ tupu ị malite iji ọgwụ a. Nri a sitere na ọgwụ ndị na-emepụta ọgwụ aromatase nke ọgwụ ọjọọ
Nke a bụ ọgwụ oral nke a na-eji eme ihe banyere ụdị ọrịa kansa. E wezụga nke ahụ, a na-ejikwa 107868-30-4 mee ihe iji gbochie ịrịa ara ara na-abịa mgbe ị gwọchara. A na-eji ndị ọrịa ara ara ara na-aṅụ ọgwụ na-agwọ ọrịa nke a maara dịka tamoxifen maka ihe gbasara 2-3 afọ na-enweghị ihe ọ bụla dị mma. A na-enyekarị ndị ọgwụ na-agwọ ọrịa ara a ọgwụ mgbe a gbasịrị ha iji belata ohere nke ọrịa ahụ na-emepe ọzọ n'ime ahụ gị. O b ur u na i nweela redio ma obu chemotherapy, ogwu gi ga-adi gi aka n'oge kacha mma iji malite iwere Exemestane.
N'aka nke ọzọ, a na-eji ọgwụ dị ka ọgwụgwọ mbụ maka ụdị ọrịa cancer ara. Na mmalite nke ọrịa cancer ara, dọkịta ga-agwa gị ka ị jiri ọgwụ a mgbe ọnọdụ ahụ adịghị njọ, na mgbe enweghị mkpa ịwa ahụ. Mgbe ụfọdụ, a na-enye ndị ọrịa ọgwụ ahụ ka ha ghara ịrịa nnukwu ara ara ara ara tupu ha agafee usoro ọgwụgwọ ahụike. Ọgwụ gị ga-abụ onye kachasị mma iji nye gị ndụmọdụ n'oge kacha mma ịṅụ ọgwụ a mgbe ị nyochachara ọrịa obi gị.
Edekwara ọgwụ ahụ iji nyere ndị inyom aka na-arịa ọrịa ara ara, nke na-akawanye njọ na mbempoo ha mgbe ha na-ewere tamoxifen. Ọgwụ ahụ na-ebelata ogo nke hormone estrogen, nke na-enyere aka ịkwụsị ụbụrụ obi nke chọrọ hormone ịzụlite. Ụmụ nwanyị, mgbe ha na-amalite ịrịa ọrịa cancer ara na mwepụ ha, nwekwara ike iji ọgwụ a nyere ha aka ịchịkwa ọrịa ahụ. Mgbe ụfọdụ, a pụrụ iji ọgwụ na-agwọ ọrịa ara ara na ụmụ nwanyị ndị na-erubeghị nnoo, kama na-agwa dọkịta gị okwu mgbe ịmalitere ịṅụ ọgwụ.
Nke a bụ ọgwụ oral na ị ga-ewere otu mbadamba nke 25mg otu ugboro kwa ụbọchị mgbe nri. Ọgwụ ahụ na-adịgide mgbe niile maka ndị ọrịa na-arịa ọrịa kansa na-amalite n'oge gara aga. Ọ dịkwa mma ịṅụ ọgwụ na otu oge kwa ụbọchị ka ị nweta nsonaazụ kacha mma. Jide n'aka na ị na-agbaso ntụziaka ndị dọkịta niile n'oge oge izu ike. Ejila obere ihe ma ọ bụ karịa ihe ndị ọkachamara gị nyere gị. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ma ọ bụ nchegbu ị ga-eji dọkịta gị kwurịta tupu ịmalite iji usoro onunu ogwu. Dọkịta gị nwere ike ịdọ aka ná ntị na ị na-ewere Exemestane ruo ọtụtụ afọ ma ọ bụ ọbụna gbasaa oge ahụ.
The Ụdị ogwu ekwesịrị iwere ya maka oge nke dọkịta nyere gị ka ọ bụrụ na oge a dabere na ọrịa obi gị. Dịka, a ghaghị ịṅụ ọgwụ ahụ maka ihe dịka afọ ise ruo iri. Mgbe ụfọdụ, ụfọdụ ndị na-amalite ịmalite ịṅụ ọgwụ na-emepụta ọgwụ mgbe ha nwụsịrị na-ewere tamoxifen ruo afọ ole na ole. Otú ọ dị, ọ bụrụ na dọkịta gị gwara gị ka ị ṅụọ ọgwụ a iji mesoo ọrịa ara ara nke laghachiri ma ọ bụ gbasaa n'akụkụ ndị ọzọ nke ahụ gị, ị ga - ewere usoro ọgwụgwọ dịka ọ bụrụ na ọ na - egbochi ọrịa ndị ahụ.
Ọbụna ma ọ bụrụ na ị dị mma, egbula ịṅụ ọgwụ gị n'emeghị ka dọkịta gị mara. I nwere ike iche na ịgwọ ọrịa, ma ọrịa cancer adịbeghị ụra ma ọ bụrụ na a naghị agwọ ya nke ọma nwere ike ịlaghachi mgbe oge ụfọdụ gasịrị. Ọ bụrụ na ị na-atụ ụra n'ihi otu ihe ma ọ bụ ihe ọzọ, ụbọchị na-esote ma ọ bụghị ihe ọzọ iji chefuo ya, buru otu tebụl dịka dọkịta gị kwadoro ebe ọ bụ na ahụ dị gị n'ahụ ga-ezu iji kpọga gị n'echi ya. Iji dị nchebe, ọ dịghị mgbe ị ga-eme ka usoro onodi ahụ ghara ịba ma ọ bụrụ na dọkịta gị anaghị atụ aro ka nke ahụ bụ ihe dị nnọọ njọ.
Boldenone Undecylenate (Equipoise) Na-eji, Ịgba Ọgwụ, Ọgwụ, Ịcha, Bulking(Na-abanye na ihe nchọgharị ọhụrụ)
A nwalere ọgwụ a ruo ọtụtụ afọ, ọ pụtawokwa na ọ na-enye nsonaazụ ọma mgbe ejiri ya mee ihe n'ụzọ ziri ezi. Ruo ọtụtụ afọ ugbu a, ọ dị mkpa ka ọ dị mkpa iji ọgwụgwọ ụfọdụ ụdị ọrịa cancer ara na ụmụ nwanyị karịa ndị na-emezurịrị di na nwunye ha. N'aka nke ọzọ, ọgwụ ahụ egosipụtala na ọ ga-adị ike igbochi ọrịa kansa na ịlaghachi mgbe ị gwọchara. Ihe doro anya ị ga - enwe mgbe ị gụsịrị ọgwụ a na - ebelata etiti estrogen, nke bụ isi ihe na - eme ka ọganihu nke ọrịa ara na ara gị. Ntughari, mgbe ejiri ya mee ihe, na-enye ndị ọrụ ezigbo utịp.
Otú ọ dị, mgbe a na-akwagharị ma ọ bụ jiri na-enweghị ntụziaka kwesịrị ekwesị site n'aka ndị na-ahụ maka ọgwụ nwere ike ibute mmetụta dị egwu dịka isi ọwụwa na ọbụna allergies. Ya mere, ọ dị mkpa mgbe nile ị ga-aga maka nlele ahụike tupu ị gaa n'ihu na usoro ọgwụgwọ na mgbe. A gwara ndị ọrịa cancer ka ha gaa nyocha ahụike mgbe niile iji nyochaa ọganihu nke ọgwụ na ọnọdụ ahụ ike. E nwekwara ọgwụ ndị ọzọ nwere ike iji ya na Exemestane maka nsonaazụ kachasị mma, ma dọkịta gị ga-enye gị ndụmọdụ. Tụkwasị na nke a, jide n'aka na ị gwara dọkịta gị banyere ihe ọ bụla na-ahụ maka ahụ ọkụ na mgbe ị na-enweta ọganihu ọ bụla mgbe ị na-ewere ọgwụgwọ ahụ.
Ọkara ndụ nwere 24hrs, ọ bụkwa ya mere eji achọọ gị otu mbadamba nke 25mg otu ugboro kwa ụbọchị. Ọgwụ ahụ ga-anọgide na-arụsi ọrụ ike na usoro ahụ gị ma debe mmepụta hormones nke estrogen dịka o kwere mee. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị chefuo iji ụbụrụ gị, adịghị etinye ụbọchị ọzọ n'echi ya. Ọgwụ dị na ahụ gị ga-ezu iji were gị gaa n'echi ya. Ndụ zuru ezu bụ 48hrs n'ihi ya emela onwe gị ka ọ ghara imebiga onwe gị ókè, ọ nwere ike iduga na nsogbu ndị siri ike. Enweghi, wepụ ma ọ bụ obere ọgwụgwọ karịa dọkịta gị gwara gị, na ọbụna mgbe dọkịta gị na-atụ aro na ị kwụsịrị ịṅụ ọgwụ ahụ, ọ ka ga-arụ ọrụ n'ime usoro ahụ gị.
7.Ụdị mmetụta dị egwu
Dịka ọgwụ ndị ọzọ, Exemestane nwere ọdịda nke kachasị nke ndị mmadụ na-adịghị agbaso ntụziaka usoro ahụ. Ọ bụrụ na ị na-aṅụ ọgwụ a n'ejighị ịga ọgwụ, ị ga-enwe ike ịnata mmetụta dị egwu. Ihe na-akpata nsogbu na nsogbu ahụ bụ isi ihe kpatara nsogbu ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, ọgwụ ahụ nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ maka gị n'ihi usoro ahụ gị ma ọ bụ allergies. Nke a bụ ọgwụ ọgwụ, ma na-ewere ya na-enweghị ihe ọmụma dọkịta gị nwere ike ime ka ị nweta ọganihu.
E nwere ụfọdụ mmetụta ndị nkịtị na-abụkarị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị niile na-arụ ọrụ, ma ha na-apụ mgbe ọnwa ole na ole mbụ gasịrị. Otú ọ dị, ọ bụrụ na mmetụta ndị ahụ na-agbatị ma ọ bụ bụrụ ndị siri ike ibu, gwa ndị ọrụ ahụike gị ịchọta ụzọ kachasị mma isi belata ha. Ihe ndị ọzọ na-emetụta;
Mgbaàmà ndị nwokeopause ebe ọ bụ na ọgwụ ahụ belata horroone estrogen n'ahụ gị ma ọ bụ ya mere o ji dị mma ịṅụ ọgwụ a mgbe ị mụsịrị nwa. O nwere ike ị gaghị enwe ike ịzụ ụmụ mgbe ịmalitere ịṅụ ọgwụ a.
Ị nwere ike ịnweta ihe mgbu na nkwonkwo gị na akwara maka ọnwa ole na ole mbụ nke usoro ọgwụgwọ, ma ha na-efu oge.
Ị nwere ike ịda mbà n'obi na ọnọdụ dị ala.
Enweghị nsogbu ọ bụla bụ nsogbu ndị ọkachamara na-enweta na ike ọgwụgwụ, ọbụna mgbe ị na-arụbeghị ọrụ.
Ịtụgharị uche na ọkpụkpụ gị ma ọ bụ osteoporosis bụ akụkụ ọzọ nke mmetụta ụfọdụ ndị ọrụ ọhụụ nwere.
Enwerekwa nsogbu ndị ọzọ dị oke egwu na ọ bụrụ na ị nweta ha, ị ga-agwa dọkịta gị ozugbo tupu ọnọdụ ahụ akawanye njọ. Otú ọ dị, ọganihu ndị a dị elu na-enwekarị ahụmahụ nke ụfọdụ n'ime ndị ọrụ ọhụụ. Ha na-agụnye mgbanwe akpụkpọ anụ na ntutu, na-abawanye na ọkwa cholesterol n'ime ahụ gị, ịhapụ agụụ, na mgbanwe imeju, n'etiti ndị ọzọ. Mmetụta mmetụta pụrụ iche mgbe ụfọdụ na-adabere n'otú ahụ gị si emeghachi ọgwụ ahụ. Ahụ mmadụ dị mgbagwoju anya, na mgbe ụfọdụ ọgwụ ọjọọ nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma na gị, mana mgbe enyi gị na - anwale ya, ọ na - akpata mmetụta dị egwu. O siri ike ikwupụta ikikere nke mmetụta ndị ị ga-atụ anya mgbe ị na-eji ọgwụ a eme ihe.
Ozi ọma ahụ bụ na enwere ike ịchịkwa ihe ka ọtụtụ n'ime mmetụta ndị dịpụrụ adịpụ ma ọ bụrụ na ị gwa dọkịta gị na oge. Otú ọ dị, ọ bụkwa ọrụ gị iji jide n'aka na ị na-agbaso ntuziaka usoro nhazi nke onye na-emepụta ọgwụ na dọkịta gị nyere. Ọzọkwa, jide n'aka na ị ga-aga nyocha ahụike mgbe nile maka ntụgharị dị mma. Gwa dọkịta gị banyere ihe ọ bụla ị nwere ike ịnwe tupu ịmalite ịṅụ ọgwụ. Na-echebara dọkịta gị nchegbu niile iji zere nsogbu ọ bụla.
Ọhụụ uru bụ nke a ma ama maka ịchịkwa ụfọdụ ụdị ọrịa cancer ara na ụmụ nwanyị. Ọ na-ebelata etiti estrogen na ahụ nke ọrịa cancer kansa na-achọ ka o too. N'aka nke ọzọ, ọgwụ ahụ ga - enyere gị aka gbochie ọ bụla ọ bụla ị ga - enwe n'ọdịnihu nke ịrịa ọrịa kansa mgbe ị nụsịrị ọrụ ịgwọ ọrịa na - aga nke ọma. Ọ bụ ezie na nke a bụ uru a kacha mara nke iji Mpụ, enwekwara uru ndị ọzọ ị na-enwe maka ịṅụ ọgwụ a.
Dịka ọmụmaatụ, nke a bụ ọgwụ ọnụ, nke ahụ pụtakwara na ị gaghị ezute ihe ọ bụla mgbe ị na-eji ọgwụ gị eme ihe. Ọgwụ ahụ nwere nnukwu ndụ nke 48 awa, ma ọ bụrụ na ị na-atụ uche usoro ọgwụgwọ ị nweghị ihe ị ga - echegbu onwe gị, nanị ị ga - achọ ịṅụ ọgwụ ọzọ na - esote, ma ị dị mma ịga. Nnyocha a gosipụtakwala na ọpụpụ pụrụ inyere aka igbochi ahụ anụ ahụ site na ịzụta ọgwụ na mmebi ihe na-emetụta ma ụmụ nwoke ma ụmụ nwanyị. E wezụga nke ahụ, a sịrị na ọgwụ ahụ dị irè n'ichebe ahụ gị dị iche iche ka ọ ghara imebi DNA ha site na radiation UV n'oge a na-ekpochapụ ya. Onye ọhụụ na - eje ozi dịka onye na - elekọta ndị na -
9.Nyocha ndị dị mma
Na-ele anya dị iche iche Nyocha ndị dị mma, ị ga-achọpụta na ọgwụ a na-enweta ụdị ọrụ ahụ dị iche iche nke onye ọrụ na onye ọzọ. Otú ọ dị, ọgwụ ahụ nwere ọnụ ọgụgụ dị oke mma na nyocha dị mma, nke pụtara na ọ bụ enyemaka dị ukwuu nye ọtụtụ ndị ọrụ. Ọgwụ dị mkpa na usoro ahụ ike karịa karịa na ọgwụgwọ na ịchịkwa ụdị ọrịa cancer ara na ụmụ nwanyị. Ọtụtụ ndị ọrụ etozila ọgwụ maka ịbụ ndị nwere ike ịmelata mmepụta hormones nke na-emepụta estrogen n'ahụ, bụ ndị na-ahụ maka ọganihu na mgbasa nke ọrịa ara ara.
Enwere ndị ọrụ hụrụ ya n'anya n'ihi na ọ bụ ọgwụ siri ike nke na-enye nsonaazụ nti mgbe ejiri ya mee ihe n'ụzọ ziri ezi. Otutu n'ime ndi ozo ajuju nwere obi uto na uzo ogwu nyere ha aka ijikwa oria ara. Ndị ọzọ na-ekwenye na ọgwụ ahụ emeela akụkụ dị mkpa n'ime usoro ịgwọ ọrịa ara ara ha na-egbochi ọrịa ahụ ịbịa azụ. Nkà dọkịta na nchọpụta sayensị dị iche iche na-egosipụtakwa ike nke ịṅụ ọgwụ cancer ara. Na nchịkọta, nnukwu pasent nke ndị ọrịa ara ara arahụ enyewo nlele anya dị mma na ọkwa dị mma.
Dịka ụfọdụ, ndị ọrụ ụfọdụ enwebeghị ahụmịhe dị mma na ọgwụ a ma na-ekwupụta mmechu ihu ha. Ọ bụ ihe dị mma maka ọtụtụ ngwaahịa ka ọgwụ ndị ahụ ka ọ ghara ịrụ ọrụ maka ụfọdụ ndị ọrụ. Otú ọ dị, ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị ọrụ ọhụụ nke nwere mmetụta dị ike na-egosi na ha adịghị etinye ọgwụ na usoro dum. Nyocha ahụike dị oké mkpa tupu ị malite iji ọgwụ ọ bụla. Ọ dịkwa mma ka ị kpọtụrụ dọkịta gị ozugbo ị malitere inwe nsogbu ọ bụla dị egwu mgbe ị na-aṅụ ọgwụ a. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị gwa dọkịta gị n'oge dị mma, enwere ike ịchịkwa ya.
N'ozuzu, Ọpụpụ bụ ọgwụ dị egwu nke dị oké mkpa n'ịgwọ ọrịa kansa na ụmụ nwanyị. Ụzọ kachasị mma iji nweta uru kachasị mma ọgwụ ọjọọ bụ ịrapara na ụbụrụ a na-atụ aro ya na mgbe niile ị ga-etinye aka na ndị ọrụ ahụike gị ma ọ bụrụ na ị nwere mmetụta ọ bụla. Akwụsịla ịṅụ ọgwụ n'emeghị ndụmọdụ dọkịta gị ebe ọ bụ na ị gaghị enwe ike ịchịkwa ọrịa kansa, nke bụ ọrịa na-egbu egbu. Mgbe ụfọdụ, ọgwụ nwere ike ghara ịrụ ọrụ maka gị, mana dọkịta gị ga - enye gị ọgwụ ọzọ nke kachasị amasị gị.
10.Ọpụpụ maka ire ere
Ọpụpụ maka ire ere a na-ere ya n'aha aha dị iche iche na obodo ma ọ bụ ógbè dị iche iche, ma aha kachasị aha maka ọgwụ a bụ Aromasin. Ị nwere ike ịzụta ihe dị ndụ na nnukwu ntanetị ma ọ bụ site na ụlọ ọgwụ ọ bụla dị gị gburugburu, mana jide n'aka na ị gaghị amalite iwe ya na-enweghị ndụmọdụ dọkịta gị. Gbaa mbọ hụ na ị ịzụta ihe ntụ ọka site na onye na-ere ahịa ma ọ bụ onye na-emepụta ihe maka nsonaazụ kacha mma. Ọ bụghị ọ bụla Ezigbo soplaya ịchọta ịntanetị nwere ike ịtụkwasị obi. Ụfọdụ nwere ike ịnwe oke dị mma ma ọ bụ ọgwụ ọjọọ nke nwere ike ịdị ize ndụ maka ahụ ike gị. Chọọ maka nyocha ndị ahịa iji duzie gị n'ime mkpebi ziri ezi.
Dọkịta gị ga - eduzi gị otu esi nweta ezigbo onye dị elu na nke dị elu site n'aka onye ahịa a tụkwasịrị obi ma tụkwasị obi. Anyị bụ ndị kachasị mma na ndị na-ere ngwaahịa na mpaghara ahụ, anyị na-enyefekwa oge. Gaa na ebe nrụọrụ weebụ anyị iji mee ka iwu gị taa ma jide n'aka na ị ga-enweta àgwà Nlereanya nke ga - enyere gị aka ịlụ ọrịa kansa. Ebe nrụọrụ weebụ anyị bụ enyi-enyi. Ya mere, ị nwere ike ime ka usoro gị dị nkasi obi site na nkasi obi nke ụlọ gị. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ma ọ bụ nchegbu, ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị mgbe niile site na email na kọntaktị anyị na ebe nrụọrụ weebụ anyị.
N'aka nke ọzọ, jide n'aka na ị ghọtara ihe iwu ndị dị na mba gị na-ekwu maka iji, ihe onwunwe, na ịzụta nke Ụdị. Anyị bụ ụlọ ọrụ na-achịkwa iwu, anyị agaghị achọ itinye ndị ahịa anyị nsogbu na iwu obodo ha maka ịbubata ma ọ bụ ịzụta ngwaahịa anyị dị elu. Dịka ọmụmaatụ, na United States of America na Canada, Exemestane ka bụ ọgwụ-nanị ọgwụ. Nke ahụ pụtara na ị nweghị ike ịzụta ọgwụ ahụ ọ gwụla ma ị nwere ndenye ọgwụ dọkịta. Otú ọ dị, ọ bụghị iwu na-akwadoghị ịzụta, ịzụta, ma ọ bụ jiri ọgwụ ahụ eme ihe, ma Exemestane abụghị ọgwụ na-ere ọgwụ na mba abụọ a.
11.Ọ bụ ihe na-egosi na ị na-agwọ ọrịa cancer ara na ụmụ nwanyị
Ọ bụ ọgwụ dị mma nke gosipụtara na afọ ndị ga-adị mkpa na ụwa ahụike na ịgwọ ọrịa cancer ara na ụmụ nwanyị. Ọgwụ ahụ na-arụ ọrụ site n'ịbelata mmepụta na horrone estrogen hormone n'ime ahụ gị nke na-ebu maka ibu na mgbasa nke ọrịa ara ara na ahụ gị. Ọ na-ejikarị ndị inyom eji ọgwụ ọjọọ eme ihe iji mezuo ha n'ihi na ọ nwere ike imetụta ụmụ nwanyị ndị ka na-amụ nwa. Nne nwanyi di oke mkpa n'ichebe ndi oru site na nloghachi ma obu gbasaa oria ara ohia mgbe ha nwesiri nrianya. Dabere na ọnya obi gị na-arịa, dọkịta gị nwere ike ịdụ gị ọdụ ka ị ṅụọ ọgwụ ahụ dịka ọgwụgwọ ma ọ bụrụ na ọrịa kansa gị dị na mmalite. Ndị na-agwọ gị nwekwara ike ịkọwa Exemestane iji jiri oge ole na ole tupu ịbanye usoro ịwa ahụ.
A na-atụ aro ka ị were otu mbadamba nke 25mgs kwa ụbọchị, nke bụ usoro ọgwụgwọ mgbe niile maka ma ndị agadi na ndị na-agwọ ọrịa ara ara na mmalite. A pụkwara iji ọgwụ ahụ mee ihe n'akụkụ ọgwụ ndị ọzọ dị mkpa nke dọkịta gị ga-eche na ọ dị mma maka gị. Cheta na ị gaghị abawanye ma ọ bụ belata usoro ọgwụgwọ ahụ n'ejighị gị ọgwụ. Ọ bụrụ na ị na-enweta nsogbu ọ bụla dị egwu mgbe ị na-aṅụ ọgwụ na-akpọtụrụ dọkịta gị maka enyemaka. Ụfọdụ mmetụta ndị dị ka isi ọwụwa, nrịanya, na ịgba agbọ nwere ike bụrụ ihe dị mma na ọnwa mbụ nke usoro ọgwụgwọ, ma ọ bụrụ na ha adị ogologo oge karịa ka ọ na-eme, gwa dọkịta gị. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị na-eme ihe ziri ezi ma na-agbaso usoro ntụziaka.
Ntuzi kachasị na Dihydroboldenone / DHB maka Bodybuilding(Na-abanye na ihe nchọgharị ọhụrụ)
Goss, PE, Ingle, JN, Alés-Martínez, JE, Cheung, AM, Chlebowski, RT, Wactawski-Wende, J., ... & Winquist, E. (2011). Nlekọta maka igbochi kansa na-egbochi kansa na ụmụ nwanyị na-ezute. New England Journal of Medicine, 364(25), 2381-2391.
Yardley, DA, Noguchi, S., Pritchard, KI, Burris, HA, Baselga, J., Gnant, M., ... & Melichar, B. (2013). Everolimus tinyere onye exemena na ndị ọrịa na-arịa ọrịa na-arịa ọrịa HR + ọrịa cancer: BOLERO-2 nke ikpeazụ na-achọpụta nlanarị ndụ. Ọganihu na-agwọ ọrịa, 30(10), 870-884.
Pagani, O., Regan, MM, Walley, BA, Fleming, GF, Colleoni, M., Láng, I., ... & Ciruelos, E. (2014). Adjuvant exemestane na-eme ka nwa nwanyị na-ebelata ọrịa cancer. New England Journal of Medicine, 371(2), 107-118.
Ihe Nduzi kachasị na Nolvadex iji agwọ ọrịa kansa